shantiram.dhakal — Fri, 03/08/2013 - 05:44
बिक्रम सम्बत २०३३ साल जाडो महिना मंगसिरको सुरुवातसँगै हामी हिमालय माध्यमिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. परिक्षाको तयारीको लागी संयुक्त पढाइ कार्यक्रम चलाउने उद्धेश्यले म, प्रकाश बुढाथोकी, सर्वधोज निरौला अनि कृष्णलाल मिश्र मिलेर चौहान बाको चारधुरे घरमा डेरा लिएर बस्यौं । किनभने मेरो घर हालको वार्ड न. १४ को पुछारमा थियो, सर्वधोजको बाघखोर र कृष्णलालको १५ न. वडामा थियो प्रकाशको घर वडा न. १० भए पनि त्यो बेला यातायातको असुविधाको कारणले ट्युसन आदि पढ्न संयुक्त राम्रो हुन्छा भन्ने बिचारले डेरा लिएर बसियो । घर छोड्ने रहर, बजार बस्ने रहर अनि साथीभाइको महत्वको उमेरले पनि होला हामीलाई कहिले घर छोडौ जस्तो पनि भएको थियो ।
सम्झनाका कुराहरू (लघु संस्मरण)
ks — Tue, 02/12/2013 - 18:22
गर्दिन भनेको काम गर्नु पर्ने, जाँदिन भनेको ठाउँमा जानु पर्ने’ सायद नियति ।
दशक पहिले एक मध्यान्हमा डटपेन, डायरी, सानो थोत्रो टेप रेकर्ड झोलामा बोकेर एक सहयोगीको साथमा पुगेको थिएँ परिचित संगीतकार बुलु मुकारुङज्यूको चाबहिलस्थित निवासमा । पत्रकारिताका ती दिनमा यस्ता भेटघाटको काम बाक्लै हुन्थ्यो उसोर कतिपय भेटघाट केवल ‘जागिरे’ साबित हुन्थे त कति चाहिँ अत्यन्त अर्थपूर्ण र अनुभबको अनुपम संगालो बन्थे । तीमध्ये बुलुजीसँगको भेट पनि एक अहम भेट साबित भएको थियो । जो आज पनि उतिकै सम्झन्छु । भेटमा गीत संगीतका, संघर्षका, अनुभवका र जीवनका अनेक पक्षमा गफिएका थियौं हामी ।
ks — Wed, 01/02/2013 - 08:17
ks — Wed, 11/28/2012 - 19:24
राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेट
ks — Mon, 11/26/2012 - 20:22
मैले ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा दुई पटक भेट्ने मौका पाएँ । एक पटक बेलायतबाट आफ्नो उपचार गरी नेपाल फर्कने क्रममा दुबईमा ट्रान्जिट हुदै आएका थिए । दुबईको डेरा स्थित इन्टर कन्टिनेन्टलको होटलको सातौँ तलामा बसेका रहेछन् । नेपाली समाज यूएईका तात्कालिक सभापति चन्द्रप्रसाद सापकोटाले एउटा बिन्ती-पत्र राजाको हातमा चढाएर नेपालीहरूको समस्याको बारेमा जानकारी गराउने भन्दै बिन्ती-पत्र तयार गर्न भन्नुभयो । मैले कागजमा जानी नजानी खेश्रा तयार गरें । वीच वीच प्रसंग मिलाउँदै सरकार ! सरकार ! भन्ने शब्द पनि हालें ।
मेरो जीवनमा किताब
ks — Mon, 11/05/2012 - 19:59
सन् १९६० को दशकसम्म देशभित्र विज्ञान प्रविधिको उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने अवसर नभएकाले विज्ञानका विद्यार्थीलाई राम्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भई कोलोम्बो प्लानको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर भारतमा उच्च अध्ययन गर्न जाने अवसर पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो।
ks — Sun, 10/28/2012 - 20:20
एकताका कपाल लामो थियो मेरो । गुजुमुज्ज परेको कर्ली कपाल कुमभन्दा तलैसम्म लर्किने ।
ks — Wed, 10/24/2012 - 20:18
६०–७० वर्षअघिको नेपाली समाजमा एउटी १४ वर्षकी सानी केटीको मनमा के कुरा खेल्दा हुन्? त्यस बेलाकी किशोरी कस्ता सपना देख्दी हो र कस्तो खेलमा रम्दी हो?
ks — Wed, 10/24/2012 - 20:13
सानो छँदा म छिमेककी आमैले बोलेको, कराएको सुनेर बस्थें र त्यसको नक्कल गरेर साथीभाइलाई हँसाउँथें। त्यसको धेरैपछि मदनकृष्ण दाइसँग एउटा दोहोरी गीत बनाउने योजना बन्यो।
मार्क्सवादको एउटा असल पक्ष - ‘प्रतिभाप्रवाह’ शृङ्खला ६० औँ
ks — Sat, 10/06/2012 - 09:25
मैले बोलेँ, “असोजअन्तिम हप्ताको शनिवार कविता भन्ने तोडले म यहाँ बड्किएर आ’को । चालचुल न भा’कोले हिस्सिएर फर्केँ । बूढियाले भनी - मान्छेलाई दसैँ लागेर घटस्थापनादेखि राजधानी छाडिसके तपाईँलाई चैँ खाइ न पाइ कविता सुनाउने चासो ।”
दुर्घटनाको मेरो अनुभव
ks — Fri, 10/05/2012 - 07:42
अचेल दुर्घटनाका खबर सामान्य भएका छन् । दुर्घटनाका खबरले मानवीय संवेदनासमेत उत्पन्न गर्न छाडेको छ । मानिसले ज्यान गुमाउने क्रम भने बढ्दै गएको छ । मैले भोगेका दुईवटा दुर्घटनाको अनुभव यस्तो छ ।
ks — Wed, 09/05/2012 - 19:16
साउनको महिना झरी नपरे पनि चारैतिरको थुम्काथुम्कीमा सेतो बादल देखिन्थ्यो । जस्ले गर्दा ती नाङो डाँडाहरू कपाल फुलेको मेरी हजुरआमा जस्तै देखिन्थे । साउने सक्रांति हुनु पर्छ, आमा मामाघर जान तयारीमा देखेपछि मैले नि कम्मर कसें । “बाटोमा हिँड्न सकिन्न घरैमा बस” भन्दै हुनुहुन्थ्यो आमा । म कहाँ मान्थेँ र ! आमा निस्किनु अगावै घरमाथि सालघारीमा पुगेर आमालाई कुरिरहेँ । त्यही नजिकै सालको रुखमा न्याउली कराउँदै थियो । गुलेली बिर्सेछु चुक चुक लाग्यो । आमा नि आईपुग्नु भो । चोरी औँला टोक्दै आमा पर्टी फर्केर मुस्कान दिएँ । आमा नि मुर्छा परेर हाँस्नुभो मेरो बठ्याँई देखेर र भन्नु भो, "हेर यो चोर त अघि नै आएर पो बसिराख्या रहेछ ! छि: छि: कपडा हेर यस्को चेपाङ जस्तै देखेको छ ।"
ks — Tue, 08/28/2012 - 21:01
ks — Sun, 07/29/2012 - 16:44
सोचिरहेको कुरा एउटा हुन्छ भइदिन्छ अर्कै । एकसुरमा हिंडिरहेको मान्छेको ध्यान गन्तव्यविन्दु मात्र हो । ऊ गन्तव्यविन्दुमा नपुगीकनै अन्यत्र पुग्यो भने उसको मनमा युद्ध गर्ने योद्धाहरू जन्मिन्छन् । कसैका हातमा भाला हुँदा हुन्, कसैका साथमा बम र बन्दुक । आखिरमा युद्ध हुन्छ नै । त्यस युद्धमा ऊ स्वयम् थकित हुन्छ र लत्र्याकलुत्रुक पर्छ । त्यसपछि भने पछुताउँदै पुनः गन्तव्य विन्दुतर्फ लाग्छ ।
त्यस्तै परिस्थितिलाई मैले पनि पिउनुपरेको छ । त्यस्तै अवस्थालाई पचाएर जिउँनुपरेको छ । कतै शब्दमा उन्नलाई शिर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था वहन गर्नुपरेको छ । सास रहुँञ्जेल संसारको फेसनलाई नस्वीकार्दा पाखे भइएला कि भन्ने त्रास पनि बोक्नुपरेको छ ।
ks — Sat, 06/23/2012 - 19:49
"यही हो हिरोसिमा?"
आमा बन्नुमै छ
कोही भन्छ यो गाउमा
गमलामा रोपिएको पिपलको बिरुवा
janma ani mrithu